Disroot: Madal bilaash ah, gaar ah oo ammaan ah oo loogu talagalay adeegyada khadka tooska ah | Laga soo bilaabo Linux
Dhawaan maqaalkeenii hore oo la yiraahdo GAFAM versus Comunidad del Software Libre: Control o Soberanía qaar baan xusnaa barnaamijyo waxtar leh oo ka mid ah «Comunidad de Software Libre», taas oo ay sii dheer tahay mid xor ah oo furan, oo bixisay heerar nabadgelyo iyo asturnaan wanaagsan. Waxaana ka mid ahaa «Disroot».
«Disroot» es, oo soo xiganaya goobta rasmiga ah ee Isbaanishka: "Una boosteejo ah oo bixisa adeegyo internetka ah, oo ku saleysan mabaadi'da xorriyadda, asturnaanta, federaalka iyo baahinta xukunka". Sidaa darteed, waxay kaloo sheegaysaa inay timaaddo: No trackers, xayeysiis lahayn, lahayn profile, lahayn macdanta xogta!
"Disroot waa mashruuc xaruntiisu tahay Amsterdam, oo ay dayactireen mutadawiciin kuna tiirsan taageerada bulshada".
«Disroot» waa barxad khadka tooska ah laga abuuro oo laga soo bilaabay xoqitaankeeda aasaasayaasheeda asalka ah, iyagoo ka fikiraya sidii loo gaari lahaa goob ay ku deeqi karaan iyaga iyo kuwa kaleba, codsiyada lagama maarmaanka ah xiriir, wadaag iyo abaabul. Sidan oo kale, in codsiyadaani ay u hoggaansamaan mabaadi'da noqoshada: Furan, Baahin baahsan, Federaal oo xushmad leh Xorriyadda iyo Asturnaanta.
Oo sidaas bay ku bilaabeen «Disroot». Ugu badnaan soo uruurinta qalabka iyo ku kicinta mashaariicda jirta hal meel, ka dibna ku dar mashruucyo kale oo adiga kuu gaar ah faa iido oo ka mid ah «Comunidad del Software Libre» iyo dhinacyada kale ee daneynaya, guud ahaan.
«Disroot» waa madal la doonayo in wax looga beddelo sida dadku inta badan ula falgalaan shabakadda, taas oo ah, waxay dooneysaa inay noqoto oo ay siiso beddel aad u fiican oo shaqeynaya dadka, marka la eego adeegyada khadka tooska ah, inta badan isgaarsiinta, si ay u gaaraan iska ilaali adeegsiga soo jireenka ah ee softiweerka lahaanshaha iyo xirnaanshaha internetka. Sida, «Disroot» waa mid ka mid ah ikhtiyaarrada furan ee anshaxeed ee la heli karo, runtiina ka madax bannaan, oo diiradda saaraya waxtarka dadka ee aan ahayn ka faa'iideysigooda.
1 Ka saar
1.1 Furitaanka Xisaabta
1.1.4 Tallaabada 4
1.1.5 Tallaabada 5
Si aad akoon uga furto «Disroot», Nidaamku waa mid aad u fudud. Waa kuwan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in sidaas la sameeyo:
Fur goobta rasmiga ah ee isbaanishka kuweena «Navegador web». Tag qeybta «Servicios» midkoodna riix. Tusaale ahaan, waxaan dooran doonnaa ikhtiyaarka ugu horeeya ee loo yaqaan «Correo». Mar haddii qaybtani ama mid kale furnaato, badhanka ayaa loo yaqaan «Inscribirse a Disroot».
Ka dib markaad riixdo badhanka «Inscribirse a Disroot», waxaa naloo soo bandhigay a«Formulario de Registro» waa inaynu buuxinaa, ka dibna riixaa dhammaadkeeda, badhanka la yiraahdo «Continuar». Meelaha soo socda ayaa ku muuqda qaabkan:
Adeegsade: Halka kaliya ee jilayaasha yaryar iyo meelaha banaan aan la isticmaali karin, laga bilaabo A ilaa Z bilaa Ñ, lambarro iyo muddooyin.
Magaca Display: Halka lagugula talinayo in loo isticmaalo isla midka loo isticmaalo Username.
Su'aal ansax ah: Meel ansax ah oo su'aasha hoos ku qoran (xarfaha cas) ay tahay in laga jawaabo, uguyaraan 150 xaraf iyo ugu badnaan 255 xaraf.
Email xaqiijin: Maxaa la isticmaali doonaa inta lagu guda jiro hawsha xaqiijinta iyo waxa la tirtirayo marka koontada la abuuro.
Furaha cusub Taas oo ay tahay in la abuuro iyada oo la raacayo shuruudaha cad ee lagu muujiyey foomka diiwaangelinta.
Mar baa la riixay badhanka«Continuar», 2 emayl ayaa imaan doona cinwaanka emaylka qoran. Mid fariin mahadnaq ah iska diiwaan gelinta madasha iyo mid kale oo leh a lambarka xaqiijinta taas oo markaa la gelinayo shaashadda diiwaangelinta ee soo socota si hawsha loo sii wado. Talaabadani waxay ku egtahay shaashada xigta halkaasoo nalagu ogeysiinayo in koodhka si guul leh loo ansaxiyay, oo badhanka la yiraahdo «Continuar».
Mar baa la riixay badhanka «Continuar», daaqad cusub ayaa ka soo muuqan doonta«Términos del Servicio», taas oo ay tahay inaan aqrino oo aan aqbalno, adigoo calaamadeeya sanduuqa lagu magacaabo waan aqbalay, ka dibna riixaya badhanka la yiraahdo «Continuar». Dhamaadka daaqad cusub ayaa furan (https://apps.disroot.org/) ina tusaya kuligeen adeegyada la heli karo (codsiyada) ee Madasha «Disroot».
In Furaha daaqad cusub oo ka mid ah«Inicio de Sesión», meesha ay tahay inaan soo bandhigno kuwayaga «Usuario y Contraseña» loo abuuray si loo galo Platform-ka «Disroot». Waxaan sidoo kale toos ugu tagi karnaa adeeg kasta. Si aan u galno una isticmaalno adeegyada halkaas lagu bixiyo waa inaan sugno ugu badnaan 48 saacadaha shaqada ama ilaa barta internetka e-maylku noogu sheegayo in durba aan awood u yeelanay inaan adeegsanno adeegyadeeda khadka tooska ah.
Sideen u arki karnaa, mar gudaha ah, barxadda «Disroot» waxay leedahay adeegyadan internetka soo socda:
Email: Adeegga Emailka
Daruur (daruur): Adeegga Kaydinta Daruuraha
Qurbajoog: Helitaanka Shabakadda Qurbajoogta Beesha.
Madal: Qolka Madasha Bulshada.
Wadahadal (XMPP): Qolka Wadahadalka Bulshada.
Etherpad (Xannibaado): Tafatirka wadajirka ah ee dukumiintiyada waqtiga dhabta ah ee shabakada shabakada.
Ethercal (Xisaab): Tafatirka wada shaqeynta ee xaashiyaha waqtiga dhabta ah ee biraawsarka webka.
Privatebin (Bin): Pastebin iyo guddiga wadahadalka khadka tooska ah, isha ugu yar iyo furan.
Soo rar: Adeeg martigelin fayl ku meel gaar ah si loogu wadaago xiriiriyeyaasha.
SearX: Raadinta adeegga adoo adeegsanaya mashiinka raadinta SearX Meta
Codbixin (Codbixin): Qorsheynta ballanta Framadate iyo adeega go'aan gaarida.
Guddiga Mashruuca (Taiga): Qalabka maamulka mashruuca.
Furaha: Qaybta Maamulka si loo beddelo ama dib loogu dhigo lambarka sirta loona maareeyo macluumaadka shakhsiyeed ee isticmaalaha.
Sidaan aragnay, «Disroot» waa madal aad u faa'iido badan oo khadka tooska ah laga helo, Maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan adeegsanno noocyo badan oo codsiyo iyo adeegyo qiimo weyn u leh nolosheena dijitaalka ah ee maalinlaha ah, dhammaantoodna ay yihiin kuwo xor ah oo ammaan ah. Sidan oo kale oo aan uga samayn karno hijro qiimo leh oo horumar leh «espacios más libres, seguros, privados y confiables», oo laga sameeyay kuweena «Comunidad del Software Libre».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Disroot: Madal bilaash ah, gaar loo leeyahay oo ammaan ah oo adeegyada internetka ah
Linus Torvalds waxaa ku jiri doona dm-clone oo loogu talagalay laanta Linux Kernel 5.4
Tani waa sida ay isugu dayeen inay afduubtaan koontada WhatsApp ee Albert Rivera